Agrochemicals, Anoparadzira mumiriri, Crotonic Acid - Freemen
Makore gumi nemapfumbamwe tarisa pane inoputira pendi uye yehuni machira.
Shanghai Freemen Chemicals Co, .Ltd inovavarira kuve imwe yevanotungamira vepasi rese makemikari vatengesi nekugadzira yakawedzera kukosha. Isu takazvipira kupa kwenguva yakareba yakasimba uye inokwikwidza michero yakanaka yemakemikari kune epasirese uye enharaunda magumo-musika vatengi kuburikidza nekubatanidza zviwanikwa.
Yedu Yekushandira Indasitiri
Isu tinopa akasiyana portfolio yekushandira vemo vagoveri nevano pfuura makore makumi maviri neshanu ruzivo muagrochemical indasitiri. Yedu yekupa masosi kubva epamberi epakati kune Anoshanda ingridients (zvipembenene, Fungicides uye Herbicides) uye mafomula. Isu tine hanya nezve quliaty yezvigadzirwa zvedu, zvisingagumisirwe kune zvekuvhenekesa uye zvinonyungudika, isu tinogona kupa akasiyana siyana kurongedza saizi kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Isu tinopa akasarudzika epamberi intermediates uye API neyedu yehunyanzvi kuziva-uye GMP yekugadzira maitiro. Isu tinoteedzera zvakanyanya zvinodiwa pane zvinonyungudusa uye kudzora kwekusachena, kuona kuchengetedzwa kwekushandisa kwezvigadzirwa zvedu.
Yedu yakasarudzwa yemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinoshandiswa kune akasiyana mafomu ekushandisa: kubva kumotokari uye matairi maindasitiri kuenda kumagetsi, kuvaka uye oiri uye gasi maindasitiri.Tiri kushumira vatengi vedu nezvigadzirwa zvedu uye nehunyanzvi kuziva-uye dhata package.
Isu takagadzirira kugadzira uye kubhadharisa kugadzira zvimwe zvemberi zvehunyanzvi kubva pamakirabhu-masiki kusvika kune ekugadzira zvigadzirwa nguva dzose uye mukureba kwenguva. Zvigadzirwa zvedu zvinobuda zvine yakasarudzika synthetic mukana neunobatanidza yakagadziriswa maitiro kana zvakasarudzika zvigadzirwa. Tinoenderera mberi nekuvandudza mutengo uye HSE standard mazuva ese.